Torolàlana amin'ny fisafidianana Apple Watch mety indrindra ho anao | Vaovao IPhone
Raha vantany vao nahita ny Apple Watch ianao ary navoaka ny vidiny, ny fanontaniana apetraky ny maro aminareo dia: Modely inona? Sporty sa vy? Tady hoditra na vy? 38 sa 42mm? Maizina sa mazava?
Ireo izay hividy ny Apple Watch dia mahazo antoka fa hanana izany eo am-pelatanany na ho ela na ho haingana, mitovy amin'ireo izay tsy hividy azy io. Fa anisan'ireo voalohany matoky izy ireo fa manameloka ny fisian'ny fisalasalana tsy manam-petra izay ezahinay hazavaina miaraka amin'ity torolàlana kely ity mifidy tsara kokoa ny maodely mety indrindra amin'ny tsirairay.
1 Seho mitovy amin'ny maodely rehetra
2 Habe roa: 38mm na 42mm
Seho mitovy amin'ny maodely rehetra
Misy zavatra tsy tokony ho adino dia izany ny Apple Watch amin'ny fotony dia mitovy amin'ny safidintsika ilay maodely nofidintsika. Manomboka amin'ny $ 349 ka hatramin'ny $ 17.000, ny Apple Watch rehetra dia manao zavatra mitovy ihany, manana tombony mitovy izy ireo ary ny estetika sy ny fitaovana ihany no mamaritra ny vidiny farany. Noho izany, raha mila Apple Watch isika nefa tsy mitady ny fanoherana ny vy na ny rendrarendra volamena, ny safidintsika dia tokony hitarika ny maodely Sport aluminium. Apple amin'ity lafiny ity dia nanana toerana mazava tsara: ny Apple Watch dia manolotra mitovy, ary izay maniry azy dia afaka mankafy azy amin'ny $ 349 mitovy amin'ny olona mandany bebe kokoa.
Habe roa: 38mm na 42mm
Raha ny hevitro, amin'ny fomba diso, miresaka modely ho an'ny vehivavy isika ary maodely ho an'ny lehilahy, raha ny tena izy dia habe roa izy ireo ary tsy misy ifandraisany amin'ny firaisana amin'ilay mividy azy. Voalohany, satria io fomba amam-panao io fa ny vehivavy dia manana famantaranandro kely kokoa dia zavatra manjavona tsikelikely, ary faharoa, satria ilay maodely 38 dia tsy dia kely loatra ka raisina ho maodely ho an'ny vehivavy, na izay heverina ho fomba mahazatra amin'izany. Ny zavatra tsara indrindra dia ny fahaizana manandrana manamboatra ny tanan'ny tsirairay amin'ireo maodely roa afaka manapa-kevitra, fa satria tsy ho vita mandritra ny fotoana maharitra izany dia misy fomba roa hanatrarana zavatra mitovy amin'izany.
Ao amin'ny fampiharana Apple Store ho an'ny iPhone dia misy maodelim-piainana roa mamela anao hanana hevitra momba ny fijerena azy eo amin'ny tananao. Mba hanaovana izany dia tsy maintsy sokafanao ny rindranasa, ampidiro ny fizarana "Kaonty" ary amin'ny "Country" safidio ny "Etazonia". Raha mankany amin'ny fizarana Apple Watch ianao izao, kitiho ny "View Pricing" eo amin'ny zoro ambony ambony ary avy eo amin'ny "Ampitahao ny haben'ny tranga." Apetraho amin'ny tananao ny iPhone-nao ary ampitahao ny fijerin'ny modely tsirairay.
Fandraisana ity pejy ity ary apetaho amin'ny ambaratonga 100%, tapaho ny maodely Apple Watch ary apetraho eo amin'ny tananao.
Eo anelanelan'ny habe iray sy iray hafa dia misy fahasamihafana $ 50, ary ho setrin'izany dia hahazo bateria kely kokoa ianao amin'ny maodely lehibe kokoa, antsipiriany iray tokony horaisina raha jerena fa ny fahaleovantenan'ny Apple Watch dia tsy hoe mahagaga.
Heveriko fa ny ankamaroan'ny olona mamaky antsika ireo fitaovana hofidiana dia voafetra amin'ny aliminiôna na vy ihany, satria izay maniry izany amin'ny volamena dia tsy hisalasala hamaky torolàlana toy izao. Noho izany dia hoferanay ny tenanay amin'ireo fitaovana "mora vidy" roa ireo.
Ny maodely mora indrindra an'ny Apple Watch (Sport) dia vita amin'ny aliminioma, miaraka amin'ny vera Ion-X izay manome fanoherana ny fikoropahana sy ny vay. Maivana kokoa (25gr ho an'ny maodely 38mm ary 30gr ho an'ny maodely 42mm) mety ho an'ireo izay hampiasa azy io amin'ny hetsika ara-panatanjahantena. Izy io dia azo vidiana amin'ny fehin-kibo fluoroelastomer misy loko dimy manaitra ihany ary ny takelaka fiambenana dia misy amin'ny volafotsy sy mainty. Ity maodely Sport ity dia misy fehy roa.
Ny maodely antonony dia vita amin'ny kristaly vy sy safira. Fitaovana mahazatra an'ny famantaranandro avo lenta sy avo lenta, izay tsikaritra amin'ny fiakarana vidiny: $ 200 eo anelanelan'ny maodely vy sy ny maodely aliminioma, tarehimarika iray izay mety hitombo arakaraka ny tadiny nofidinao, mahatratra hatramin'ny $ 1099 amin'ny Modely mainty misy tady vy mitovy loko. Hita ihany koa amin'ny lanjany, miaraka amin'ny 40gr sy 50gr ho an'ireo maodely 38 sy 42mm tsirairay avy. Mahavita ny tsy fitoviana ve? Eny, hiankina amin'ny fahefa-mividin'ny tsirairay sy amin'ny tsiro izany. Raha tsy niasa afa-tsy tamin'ny fiasan'ny famataranandro fotsiny isika, dia tsy ho azontsika hoe maninona no misy famantaranandro manana kalitaon'ny vidiny tsara (toa an'i Seiko) sy ny hafa fa ny "mitovy" dia mihoatra ny avo roa heny sy telo heny (toy ny Tissot), ary izany fa tsy mila mankany amin'ny farany ambony.
Ao amin'ny maodely fanatanjahantena, ny olan'ny fehikibo dia voafetra amin'ny loko, miaraka amin'ny karazany dimy hisafidianana nefa tsy misy fiovana ny vidiny rehefa misafidy iray na iray hafa. Saingy ny maodely vy dia efa mametraka olana lehibe, satria ankoatry ny loko dia misy fitaovana samihafa ary ny vidiny samihafa arakaraka ny safidy. Plastika, hoditra sa vy? Brown, mavokely, mainty na fotsy? Sarotra ny safidy, ary toy ny zavatra hafa rehetra, dia hiankina amin'ny safidin'ny tsirairay izany. Ny maodely vy fototra ($ 549 sy $ 599) dia misy fehy fluoroelastomer toy ny maodely Sport, saingy misy loko vitsivitsy kokoa. Raha tadiavina vita amin'ny hoditra isika dia tsy maintsy efa mandoa $ 100 ka hatramin'ny $ 200 arakaraka ny maodely voafantina, ary raha mila ilay fehin-kibo isika dia manana ny safidy mora indrindra amin'ny fehikibo Milanese ($ 100 fanampiny) na ny tena lafo ( ary sarobidy) tady rohy vy amin'ny $ 400 bebe kokoa.
Ny fehy dia azo vidiana misaraka foana. Ny zavatra mahazatra ihany koa dia ny fatoran'ny modely mahazatra dia azo ampiasaina miaraka amin'ny Sport ary ny mifamadika amin'izany, saingy ny vidiny dia ambony noho ny raha nividy azy niaraka tamin'ny famataranandro. Ohatra, ny strap Milanese dia vidin'ny $ 149 raha toa ka raha mividy azy mivantana amin'ny famataran-karena isika dia mitentina $ 100 mihoatra ny maodely mahazatra. Ny fehin'ny Gold Edition dia tsy azo vidiana misaraka.
Raha efa tapa-kevitra ny hividy ny Apple Watch ianao dia izao no zavatra tsara indrindra ary azonao atao ny mivarotra azy amin'ny vidiny tsara indrindra. ity rohy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » Apple Watch » Torolàlana amin'ny fisafidianana Apple Watch mety indrindra ho anao
Ahoana ny fomba fihenam-bidy avy amin'ny iOS 8.2 mankany amin'ny iOS 8.1.3
Tady vy sy hoditra ho an'ny Apple Watch latsaky ny $ 100